Sheekh Xassan Daahir Aweys Oo Muddo Ka Dib Warbaahinta Ka Soo Dhex Muuqdey , Wareysi Uu Bixiyey , Halka Uu Ku Sugan Yahay Iyo Waxyaabaha Uu Ka Hadley +Sawiro | Saxil News Network
Sheekh Xassan Daahir Aweys Oo Muddo Ka Dib Warbaahinta Ka Soo Dhex Muuqdey , Wareysi Uu Bixiyey , Halka Uu Ku Sugan Yahay Iyo Waxyaabaha Uu Ka Hadley +Sawiro
Moqdisho (SaxilNews):- Wargays ka soo baxa dalka Canada oo la yiraahdo The Star ayaa waxka qoray waraysi uu ka qaaday Sh, Xasan Daahir Aweys oo muddo 4 sanno ah u xiran dawlada Soomaaliya.
Wariye wargeyskaan ka tirsan oo la kulmay Sh, Xasan Daahir Aweys ayaa sheegay inay jirin wax weyn oo fikir ahaan iska badalay hadda iyo sanadkii 2006 oo uu isla Muqdisho kula kulmay.
Sh, Xasan Daahir oo hadda xabsi guri ku ah magaalada Muqdisho xubno qoyskiisa ka mid ahna ay la noolyihiin ayaa wax laga weydiiyay arrimo dhawr ah oo la xariira noloshiisa iyo afkaarihiisa siyaasadeed.
Wariyaha waraysigaan qaaday ayaa waxaa uu sheegay in inkastoo ay dunnida wax badan iska badaleen haddana Sh, Xasan Daahir Aweys ay jirin wax badan oo noloshiisa iska badalay marka laga reebo inuu haysan xorriyad uu ku dhaq dhaqaaqo.
In Soomaaliya ay u baahantahay dawlad Isami ah oo loo dhiso ayaa ka mid ah waxyaabaha willi maskaxdiisa ku jira waxaana uu intaa ku daray in Shareecadda Islamka ay tahay waxa kaliya ee lagu dhaqayo dal Muslim ah.
Mar wax laga weydiiyay inuu iskaga baxay ururka Al-Shabab ayuu Xasan Daahir Aweys sheegay inuu waligiiba ku biirin Al-Shabab hase ahaatee ay is taageersanaayeen maadaama ay hal cadow lahaayeen sida uu yidhi.
“Waxaa jira farqi u dhaxeeya inaa cid ku biirto ama aad taageerto anigu waan taageeray mooyee waligay kuma biirin maadaama aanu isku cadaw aheyn”.
Isla Al-Shabab mar uu ka hadlayayna waxaa uu sheegay in Al-Shabab ay markii dambe dhanka fikirka isku qabteen taasoo markii dambe keentay inuu kasoo dhex baxo.
Dad badan ayaa aaminsan in Al-Shabab ay Xasan Daahir ugu hanjabeen inay dilayaan waxaana taas cadeyn u ah xubno wadaadkaan ku feker ahaa oo la dilay sida wargeysku ku waramayo.
Waxaa jira arrin caadi ahaan looga bartay hogaamiyaasha Al-Shabab kasoo dhex baxa oo ah inay cambaareeyaan weerarada ay Al-Shabab dadka rayidka ah ku dilaan sidaasoo oo kale ayuuna sameeyay intii aan ka qaadayay waraysiga oo Sh, Xasan waxaa uu hadda aaminsan yahay in Al-Shabab iska xasuuqaan dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Sababta uu horey u cambaareyn waayay mar wax laga weydiiyay ayuu sheegay in maadaama xaalad dagaal lagu jiray ay jirin sabab uu arrintaas uga hadlo waayo xataa dawlada ayaa dad rayid ah madaafiic au riday ku waxyeeloobi jiray.
Waraysigaan oo Sh Xasan Daahir Aweys laga qaaday ka hor inta aan lasoo dooran Mweyne Max’ed C/llaahi Farmaajo ayaa sababta baahintiisa dib loogu dhigay waxaa uu wargeysku ku sheegay in xilligaas ay socdeen dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayay in Shiikha lagu dajiyo dalka Qatar inkastoo ay markii dambe qorshahaas bur buray sida wargayska aanu xiganayno ee The Star qorayo.
Mar wax laga weydiiyay aragtiisa ku aadan soo if bixista kooxda isku magacawday Khilaafadda Islamka ee Daacish iyo inay Soomaaliya farac ku yeelato waxaa uu sheegay inuu marnaba taageersananyn in Daacish ay Soomaaliya ka shaqayso arrinta soo if baxana waxaa uu ku tilmaamay in hogaamiyaha kooxdaas Abu Bakar Al-Baqdadi uu arko shaqsi is magacaabay sidii Usama Bin Laden oo kale.
Sidoo kale in dawladaha reer galbeedku ku lug yeeshaan arrimaha Soomaliya ayuu Shiikhu kasoo hor jeestay.
Sh, Xasan Daahir Aweys ayaa ku jira gacanta dawlada Soomaaliya waxaana uu sidoo kale ku jiraa liiska xubnaha sida weyn loo doon doonayo ee Maraykanka iyo Q,M.